Xirrirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ayaa shaaciyay xilliga uu dib u furmayo Horyaalka heerka 1-aad ee kubadda cagta xilli ciyaareedka 2016-2017
Thursday, September 20th, 2018 - 15:24:04
Saturday February 11, 2017 - 18:17:53 in Wararka by Muuse Cabdi
xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta ayaa shaaciyey in Horyaalka kooxaha heerka koowaad ee kubadda cagta oo hakad ku jiray in kabadan laba bilood uu dib u furmi doono 13-ka bishan February oo Isniinta ku beegan.
horyaalka oo ay ku tartamayaan 10 kooxood ayaa waxaa galabnimada Isniinta la ciyaari doonaa laba kulan oo lagu kala ciyaari doono garoomada Banaadir iyo Jamaacadaha oo ku kala yaala degmooyinka Cabdi Casiis iyo Hodan.
kooxaha Heegan iyo Banadir S.C ayaa isniinta ku kulmi doona Garoonka Banaadir Stadium ee degmada Cabdi Casiis.
halka kooxaha Jeenyo FC iyo Dekeda iyana ay isla isniinta isaga hor imaan doonaan garoonka Jamaacadaha ee degmada Hodan.
Horyaalka kooxaha heerka koowaad ee kubadda cagta oo inta aan hakad le gelin la ciyaaray laba kulan ayaa hada waxaa hogaaminaya kooxda Banadir S.C oo leh 6 dhibcood maadaama ay guuleysatay labadii kulan oo ay horyaalka ka ciyaartay.
kaalinta labaadna waxaa kuwada jira kooxaha Horseed iyo Dekeda oo wadaaga min 4 dhibcood.